Showing posts sorted by relevance for query မီးယပ်. Sort by date Show all posts
စုံတွဲများ သိထားရမဲ့ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာ ဘယ်အချိန်ကို ပြောတာလဲ
5/02/2014 06:37:00 AM health-news
Pregnancy ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာ Sperm ကျား-သုက်ပိုး နဲ့ Egg မ-မျိုးဥတွေ Fertilization ပေါင်းစပ်ချိန် Conception သန္ဓေတည်ချိန်ကို ခေါ်တာလား။ အဲလိုဖြစ်လာပြီး နောက်တပါတ်အကြာ Embryo implantation သားအိမ်ထဲမှာ တွယ်ကပ်လိုက်ချိန်ကို ခေါ်တာလား။
ဒီအယူအဆ ၂ မျိုးကို University of Chicago ကနေ သုတေသနလုပ်တော့ ဆရာဝန်တွေ အမြင်မတူကြတာ တွေ့ရတယ်လို့ American Journal of Obstetrics and Gynecology မှာ ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းနဲ့ အဖြေဟာ ဘာသာရေးအယူအဆက သက်ရောက်မှာဖြစ်သလို ကိုယ်ဝန်ကို မလိုချင်လို့ ဖျက်ပြစ်တာမှာလဲ လုပ်သင့်တယ်၊ မလုပ်သင့်ဘူး ဆုံးဖြတ်ရာမှာလဲ သက်ရောက်ပါတယ်။
အမေရိကားမှာရှိတဲ့ သားဖွါး-မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်ပေါင်း ၁၈ဝဝ ကိုမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။
- မေးခွန်းကို အဖြေပေးကြတဲ့ ဆရာဝန်ပေါင်း ၁၁၅၄ ဦးရှိတယ်။
- ၅၇% က ကိုယ်ဝန်ရှိပြီဆိုတာ ကျား-သုက်ပိုး နဲ့ မ-မျိုးဥတွေ ပေါင်းစပ်ချိန်၊ သန္ဓေတည်ချိန် ဖြစ်တယ်။
- ၂၈% က ကျား-သုက်ပိုး နဲ့ မ-မျိုးဥတွေ ပေါင်းစပ်ပြီး နောက်တပါတ်အကြာ သားအိမ်ထဲမှာ တွယ်ကပ်လိုက်ချိန် ဖြစ်တယ်။
- ၁၅% က မသေခြာဘူး
Conception သန္ဓေတည်ချိန်လို့ပြောတဲ့ ဆရာဝန်တွေက ဘာသာရေးဦးစားပေးသူတွေဖြစ်ပြီး Abortion ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာကို အားမပေးကြဘူး။
ကောက်ချက်ချရရင် "သားဖွါး-မီးယပ် အထူးကုဆရာဝန်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကို သတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ်ဝန်ဖျက်တာကို မလိုလားကြဘဲ၊ ဘာသာရေးအဆုံးအမ တည်ကြတယ်။"
ကျန်းမာ-သန်စွမ်းတဲ့ Sperm ကျား-သုက်ပိုးတွေထဲက တခုဟာ ရင့်မှည့်နေတဲ့ Egg မ-မျိုးဥတခုထဲကို အောင်အောင်မြင်မြင် Penetration ထိုးဖေါက် ဝင်ရောက်ပြီး၊ Cell division (ဆဲလ်) ပွါးခြင်းဖြစ်စဉ် စတင်ပြီဆိုရင် Fertilization (ဖါတလိုက်ဇေးရှင်း) ပေါင်းစပ်ခြင်း လို့ခေါ်တယ်။ Embryo သန္ဓေဆိုတာဖြစ်ပြီ။ ဆက်ပြီး ကြီးထွားလာတော့မယ်။
ကျား နဲ့ မ ပုံမှန် Sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံကြရင် Millions of sperm သန်းနဲ့ချီများတဲ့ ကျား-သုက်ပိုးတွေဟာ Vagina (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို စွန့်ထုတ်မယ်။ ဆက်ပြီး cervix သားအိမ်အဝထဲ ဝင်တယ်။ Uterus သားအိမ်ထဲဝင်လာမယ်။ Fallopian tubes သားအိမ်ပြွန်ဆီဆက်သွားမယ်။
အမျိုးသမီးဟာ ရာသီလလည်ရက်မှာဖြစ်တဲ့ Ovulation မျိုးဥထွက်ချိန်မှာ Hormones ဟော်မုန်းတွေ ထွက်လာတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သားအိမ်အဝမှာရှိနေတဲ့ cervical mucus အချွဲရည်ဟာ ပြောင်းလဲလာပြီး သုက်ပိုး အလွယ်တကူ ဝင်လာစေအောင် ဖန်တီးပေးရာကျတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက ဒီအလုပ်တာဝန်ကို ဆန့်ကျင်ပေးတာမို့ သုက်ပိုး အထဲကို မဝင်စေအောင် တားဆီးပေးတယ်။ သန်းနဲ့ချီများတဲ့သုက်ပိုးတွေထဲက ၂ဝဝဝ လောက်ကဘဲ လိုရာခရီးအထိ ရောက်နိုင်ကြတယ်။
သန္ဓေတည်စေဘို့ဆိုတာ ရက်ရွေးမှန်ရတယ်။ Ovum မ-မျိုးဥက Ovary မျိုးဥအိမ်ကနေ ထွက်ပြီးတဲ့နောက် ၁၈-၂၄ နာရီကြားမှာ Sperm သုက်ပိုးနဲ့တွေ့တာ အကောင်းဆုံး အချိန်ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျား သုက်ပိုးတွေကလဲ ထွက်ပြီးတဲ့နောက် ၃-၅ ရက်သာ အသက်ရှင်နေမယ်။ ဒါ့ကြောင့် အကောင်းဆုံး ကိုယ်ဝန် ရစေနိုင်တဲ့ရက်ဆိုတာ ရာသီလတခုမှာ ၅-၆ ရက်သာရှိတယ်။ သုတေသနလုပ်ကြည့်တော့ ကျန်းမာသန်စွမ်းကြတဲ့ အတွဲတွေဟာ ပြောတဲ့ နေ့ကောင်း-ရက်သာမှာ အတူနေကြတာတောင်မှ ကိုယ်ဝန်ရလမ်း ၃ဝ-၅ဝ% သာရှိတယ်။
သုက်ပိုးနဲ့ အဲလိုပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့နောက် Fertilized egg မ-မျိုးဥဟာ ကိုယ်ဝန်တည်စေဘို့ ခရီးဆက်ရသေးတယ်။ သားအိမ်ပြွန်ကနေ သားအိမ်ထဲအထိ ဝင်လာပြီး သားအိမ် အတွင်းဆုံးနံရံမှာ Implantation တွယ်ကပ်ဘို့ဆိုတာ ပျမ်းမျှ ၇ ရက်ကြာသေးတယ်။ ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေက တွယ်ကပ်မှာကို ဟန့်တားတယ်။
သားအိမ် အတွင်းဆုံးနံရံမှာ တွယ်ကပ်ပြီဆိုတာနဲ့ ဟော်မုန်းနောက်တမျိုး တိုးထွက်လာပြန်တယ်။ Human Chorionic Gonadotrophin (hCG) လို့ခေါ်တယ်။ ကိုယ်ဝန် ရှိ-မရှိ စစ်တဲ့အခါ အဲဒီ (hCG) ရှိ-မရှိကို စစ်တာ ဖြစ်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် Pregnancy hormone လို့လဲ ခေါ်တယ်။ သူရှိနေမှသာ Pregnancy ကိုယ်ဝန် ဆက်တည်မယ်။ တရက်ထက် တရက် များများလာရတယ်။ တရက်မှာ ၂ ဆ တိုးတာဟာ နောက်ဆုံး ၆ဝ-၈ဝ ရက်မှာ အများဆုံး ရှိလာမယ်။
12/19/2013 05:01:00 PM health-news
4/28/2014 08:01:00 PM beauty knowledge
ပူပြင်းလှတဲ့ နွေရာသီမှာ အေးမြတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ဖို့ ဘယ်လို ပြင်ဆင်ရမယ်ဆိုတာ ပျိုမေတိုင်း သိရှိလိုကြပါတယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။
မြန်မာ့ရေမြေမှာတော့ မြန်မာအမျိုးသမီးလေး တွေ အေးမြတဲ့အလှပိုင်ရှင်လေးဖြစ်ဖို့ဆိုရင် သနပ်ခါးပါးကွက်လေးနဲ့ အလှဆင်နိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။
သနပ်ခါး လိမ်းခြယ်တဲ့နေရာမှာ တချို့တွေက သဘာဝ သနပ်ခါးကို သန့်စင်တဲ့ ရေကျဲကျဲနဲ့ သွေးပြီး လိမ်းခြယ်ကြသလို အချို့တွေကျတော့ လည်း အသင့်လိမ်းခြယ် နိုင်တဲ့ သနပ်ခါးတုံးလေး တွေကို ခပ်ပျစ်ပျစ်လေးလိမ်းခြယ်ကြတယ်။
သနပ်ခါးလိမ်းတဲ့အခါ အချို့တွေက တော့ ရိုးရိုးအသားအရေလှအောင် မျက်နှာ တစ်ပြင်လုံးကို လိမ်းလိုက်ပေမယ့် အလှအပကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ပျိုမေတွေအတွက်တော့ ပါးကွက် လှလှလေးတွေနဲ့ အလှဆင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
''ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက ပါးကွက် မျိုးစုံကို အဖေနဲ့အမေက ကွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ မှတ်မိသလောက်ကတော့ သစ်ရွက်ပုံလေးတွေ၊ စက်ဝိုင်းပုံလေးတွေ၊ လေးထောင့်ကွက်၊ အဝိုင်း ကွက်နဲ့ အသည်းပုံကွက်လေးတွေ ကွက်ပေးပါ တယ်''လို့ မန္တလေးမှာနေထိုင်ခဲ့သောအမျိုးသမီး ငယ်လေးတစ်ဦးက ပြောပြသည်။
ပါးကွက် လေးထောင့်လေးတွေ၊ အဝိုင်းပုံတွေကိုတော့ လူတိုင်း ပုံဖော်တတ်ကြ ပေမယ့် အသည်းပုံ၊ စက် ဝိုင်းအကွင်းကွင်းပုံ၊ သစ် ရွက်ပုံလေးတွေကို ပုံဖော်အလှဆင်ဖို့ နည်းနည်းစဉ်းစားကြရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
သစ်ရွက်ပုံသနပ်ခါးပါးကွက်ကို ပုံ ဖော်ချင်ရင်တော့ နည်းလမ်းနှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ ပထမနည်းလမ်းက သစ်ရွက်တစ်ရွက်ကို ခူးပြီး သစ်ရွက်ပေါ်မှာ သနပ်ခါးတွေ ဖုံးအုပ်လိုက်ပါ။ သနပ်ခါးဖုံးထားတဲ့ သစ်ရွက်ကို မျက်နှာပေါ်မှာကပ် ပြီး ခွာလိုက်တာနဲ့ သစ်ရွက်ပုံပါး ကွက်လေး ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
အချို့တွေကျတော့ လက်နဲ့သစ်ရွက်ပုံဆွဲပြီး တုတ်တံလေး(စုတ်တံလေး)နဲ့ သစ်ရွက် သစ်ခက်တွေကို ရေးဆွဲကြတာမျိုး လည်း ရှိပါတယ်။
အသည်းပုံ သနပ်ခါးပါး ကွက်လေးရရှိဖို့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေး အဖုံးလေးတစ်ခု လိုအပ်ပါတယ်။ အဲဒီအဖုံး လေးကို သနပ်ခါးအနှစ်ရည်တို့ပြီး မျက်နှာ ပြင်ပေါ် အဝိုင်းလေးနှစ်ဝိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်လိုက် ပြီး အဝိုင်းရဲ့အောက်ခြေကိုဖျက်ပြီး အသည်းပုံ အောက်ခြေအချွန်ပုံစံလေးကို တုတ်ချောင်း(သို့ မဟုတ်) စုတ်တံနဲ့ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ငယ်ရွယ်တဲ့ မီးမီးလေးတွေအတွက် ကတော့ နှုတ်ခမ်းနီဆိုးဆေး အဖုံးလေးတွေနဲ့ အဝိုင်းအဝိုင်းပါးကွက်ပုံစံလေးတွေ ပြုလုပ်ပေး နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါက်ရောက်နေတဲ့ သနပ်ခါးပင်တွေရဲ့ အရွက်၊ ပင်စည်၊ အခေါက်၊ အမြစ်တွေမှာ အေးမြပြီး ဆေးဖက်ဝင်စေတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ကြောင်း သိရပါ တယ်။
''သနပ်ခါးဆိုတာ နေလောင်ဒဏ်ကို ကာကွယ်ပေးတယ်။ ကျွန်တော်တို့ထုတ် ထားတဲ့ သနပ်ခါးကတော့ အသားအရေတွန့်တာတွေပါ ကာကွယ်ပေး နိုင်ပါတယ်''ဟု တောင်ကြီးမောက် မယ်သနပ်ခါးမှ တာဝန်ရှိသူတစ် ဦးက ပြောသည်။
(၁) သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့ကြောင့် စိတ် ကြည်လင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၂) ရေ နဲ့သွေးပြီးလိမ်းခြယ်ရတဲ့အတွက် အေးမြမှုကို ရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
(၃) နေရောင်ခြည်ဒဏ် ကိုလည်း ကာကွယ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
(၄) ဝက်ခြံများကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
(၅) အသားအရေ ချောမွတ်စိုပြည်စေမှာဖြစ်ပါ တယ်။
(၆) မှိုစွဲနာကိုကင်းစင်စေမှာဖြစ်ပါတယ် လို့ သနပ်ခါးရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်အကြောင်းကို သိရ ပါတယ်။
သနပ်ခါးမှာ ငန်းမန်းကိုနိုင်စေသလို အပူနာ၊ အအေးနာနှစ်မျိုးစလုံး အတွက်လည်း အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဆေးမှာ သုံးပြီး အနာကြီးရောဂါသည်များအတွက် သနပ် ခါးရွက်ပြုတ်ကာ ရေချိုးချွေးအောင်းနိုင်ပါတယ်။ ငှက်ဖျားနာအတွက် အရွက်ကို ဆားခတ်သောက် နိုင်ပြီး အမြစ်ကို နနွင်းနဲ့သွေးလိမ်းပါက မီးယပ် ရောဂါသည်များ ပျောက်ကင်းနိုင်တယ်။ ကလေး ငယ်တွေ ချွဲကျပ်ရင် ကွမ်းရွက်စိမ်းရည်နဲ့တိုက် လို့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလှအပအတွက်သာမက ကျန်း မာရေးအတွက်လည်း အထူးအသုံးဝင်တဲ့သနပ် ခါးကို ရှေးမြန်မာဘုရင်များလက်ထက်ကတည်း က အသုံးပြုကြပြီး ယနေ့ခေတ်မှာ အသင့်လိမ်း သနပ်ခါးတုံး၊ သနပ်ခါး အနှစ်၊ အရည်များကို တိုးချဲ့ထုတ်လုပ်လာကြပါတယ်။
ဓာတုဗေဒလုံးဝမပါတဲ့ သစ်မြစ်သနပ် ခါးတုံးကို လိမ်းခြယ်အလှဆင်ရတာ ကြိုက်နှစ် သက်သူများရှိသလို အသင့်လိမ်းရလွယ်ကူပြီး ကံ့ကော်၊ ရှင်မတောင်၊ စံပယ်၊ ခရေ၊ သံပရာ စတဲ့ရနံ့ပါဝင်တဲ့ အသင့်သုံးသနပ်ခါးခဲများကို သုံးစွဲသူများစွာရှိကြပါတယ်။
ယင်းသနပ်ခါးဘူးများကို ဈေးနှုန်း ကျပ် ၁၅ဝဝကျော်၊ ၂ဝဝဝနီးပါးဖြင့် ရောင်းချလျက်ရှိကြောင်းနှင့် ဈေး ကွက်အတွင်းမှာတော့ တောင်ကြီးမောက် မယ်၊ ရွှေပြည်နန်းနှင့် ရွှေဘိုမင်းသမီး သနပ်ခါးများကို လိမ်းခြယ်သူများပြား လှပါတယ်။
သို့ဖြစ်၍ မြန်မာ့ပျိုမေတွေအနေ နဲ့ မြင်သူတိုင်း ရင်မှာ အေးချမ်း တဲ့ အလှတရားများကို ပိုင်ဆိုင် နိုင်ကြစေဖို့ ယခုတစ်ပတ်အလှအပ ရေးရာ လမ်းညွှန်ကဏ္ဍမှလေ့လာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။
Flower News Journal | အတွဲ ၁၀ ၊ အမှတ် ၁၆
4/07/2014 08:27:00 PM woman-health
2/13/2014 09:18:00 AM woman-health
ရာသီသွေး ဆင်းများခြင်းနဲ့ သွေးဆင်းရက် ကြာခြင်း တွေဟာ အများအားဖြင့် အပျိုဖော် ဝင်ခါစ မိန်းကလေး ငယ်တွေနဲ့ သွေးဆုံး ခါနီး
အမျိုးသမီး တွေမှာ ဖြစ်တတ်ပေမယ့် တစ်ခါ တစ်ရံ အသက်၂၀ ကျော်နဲ့ ၃၀ ကျော်အရွယ် အမျိုးသမီး တွေမှာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရာသီသွေး ဆင်းများ လွန်ရင် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် နာကျင်မှု၊ ပျို့ခြင်းနဲ့ မသက်မသာ ဖြစ်ခြင်းတွေကို ခံစားရပြီး ပုံမှန်နေ့စဉ် လုပ်ဆောင် နေကျ အလုပ်တွေကိုတောင် မလုပ်နိုင်တော့ တာမျိုး ဖြစ်တတ် ပါတယ်။ ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ရာသီသွေး ရုတ်တရတ် အများကြီး ဆင်းရင် သားဖွား မီးယပ် အထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြသဖို့ လိုပါတယ်။
ရာသီသွေး များများ ဆင်းစေနိုင်တဲ့ အကြောင်းအရင်းတွေ ကတော့ မျိုးဥအိမ်ရဲ့ လုပ်ဆောင်မှု မမှန်ခြင်းကြောင့် ဟော်မုန်း မညီမျှခြင်း၊ သားအိမ် အတွင်းမှာ ကင်ဆာ မဟုတ်တဲ့ အကျိတ် ဖြစ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်နံရံမှာ အဖု အသီးဖြစ်ခြင်း၊ သန္ဓေတားဖို့ အတွက် သားအိမ် တွင်းထည့် ပစ္စည်းသုံးခြင်း၊ အရောင်ကျ ဆေးနဲ့ သွေးမခဲ ဆေးတွေကို မှန်မှန်သောက်ခြင်း စတာတွေ ဖြစ်နိုင် ပါတယ်။
ဒီထက်ပိုပြီး ပြင်းထန်တဲ့ အကြောင်းရင်း တွေလည်း ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။ သားအိမ် ကြွက်သား ထဲကို သားအိမ် အတွင်းမြှေးမှ ဂလင်းတွေက ထိုးဖောက် ဝင်ရောက် ကြီးထွားခြင်း၊ မျိုးဥအိမ်၊ သားအိမ် ဒါမှမဟုတ် သားအိမ်ခေါင်း ကင်ဆာ တွေကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အလုပ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် လုပ်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြီးအကျယ် ထိခိုက် ခံစားရခြင်းတွေ ကြောင့်လည်း ရာသီသွေး ဆင်းများ နိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန် ပျက်ကျခြင်း ကြောင့်လည်း သွေးအများကြီး ဆင်းနိုင်ပါတယ်။
ရာသီသွေး များများ ဆင်ခြင်းကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရေဓာတ် ခန်းခြောက်မှုနဲ့ မရှိမဖြစ် အာဟာရ ဓာတ်တွေ ဆုံးရှုံးမှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရာသီသွေး ဆင်းများ သူဟာ ရေနဲ့ သစ်သီး ဖျော်ရည် များများ သောက်ဖို့၊ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို စားပေးဖို့ အလွန်အရေး ကြီးပါတယ်။
ရာသီသွေး ဆင်းများရင် သံဓာတ် ဆုံးရှုံးမှုလည်း များတဲ့အတွက် သံဓာတ် ချို့တဲ့ သွေးအား နည်း ရောဂါ မဖြစ်အောင် အသား၊ ငါး၊ ကြက်ဥ၊ ဘဲဥနဲ့ ပဲအမျိုးမျိုးတွေကို စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ သွေးထဲက ဟေမိုဂလိုဘင် အဆင့်ကို ထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပြီး အားနည်းတာနဲ့ မောပန်း နွမ်းနယ် တာတွေ မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်ပါမယ်။
စားတဲ့ အစားတွေထဲမှာ ချဉ်တဲ့ သစ်သီးတွေလိုမျိုး သဘာဝ ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစာ တွေလည်း ပါဝင်သင့် ပါတယ်။ ရာသီလာစဉ် အတွင်း နာကျင်မှုနဲ့ စိတ်ဖိစီးမှု လျော့ပါးစေဖို့ ကဖင်းပါတဲ့ အရည်တွေ (ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊ ကိုလာ)ရှောင်ပြီး သဘာဝ လက်ဖက်ရည် (Herbal Tea) သောက်ပေးပါ။
အကိုက်အခဲ ပျောက်ဆေးတွေကို တတ်နိုင်သမျှ မသောက်ပါနဲ့။ လေ့လာမှုတွေ အရ တက်ကြွတဲ့ ဘဝနေထိုင်မှု ပုံစံရှိသူ အမျိုးသမီး တွေဟာ အထိုင်များတဲ့ အမျိုးသမီး တွေထက် ဒီပြဿနာ အဖြစ်နည်းတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ရွရွပြေးတာ၊ ရေကူးတာ၊ အေရိုးဗစ် လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာ ဒါမှမဟုတ် ယောဂ ကျင့်တာလိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်း တစ်ခုခုကို နေ့စဉ် အနည်းဆုံး တစ်နာရီခန့် လုပ်ပါ။
ကလေးငယ်ကို ခိုးယူပြီး လူကုန်ကူးတဲ့သူဆီ ပြန်ရောင်းတဲ့ သားဖွားမီးယပ်ဆရာဝန်
1/03/2014 12:00:00 PM crime-news world-news
တရုတ် နိုင်ငံ မှာ လူကုန် ကူးမှု နဲ့ ပတ်သက် ပြီး သေဒဏ် ပြစ်ဒဏ် အထိ ချမှတ် နေ ပေမယ့် တစ် အိမ် ထောင် ကို ကလေး တစ်ယောက် သာ ယူရမယ့် မူဝါဒ ကြောင့် ထိရောက် စွာ ဟန့် တား နိုင်ခြင်း မရှိ သေး ဘူး လို့ သိရပါတယ်။ လူကုန် ကူးတွေထဲမှာ ဆရာဝန်တွေလည်း ပါဝင် ပတ် သက် နေ တာ မို့ တရုတ် အာဏာ ပိုင် တွေ အတွက် သတိပေး တပ်လှန့်သလို ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံက သားဖွား မီးယပ် ဆရာဝန် တစ် ဦးဟာ သူ့ အနေနဲ့ လူကုန်ကူးမှုတစ်ခုမှာ ပါဝင် ပတ်သက်ခဲ့တယ်လို့ ထွက်ဆိုခဲ့တာကြောင့် တရားရုံးမှာ စစ်ဆေးမှုတွေ စတင်ပြုလုပ်နေ ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆရာဝန်ရဲ့ အမည်က Zhang ဖြစ်ပြီး မွေးရာပါ နာမကျန်း ဖြစ်နေ တယ်ဆိုပြီး ကလေးမိဘတွေကို ပြောဆိုပြီးတဲ့နောက် ကလေးငယ်ကို ခိုးယူကာ လူကုန်ကူးသူတွေ ထံ ရောင်းချခဲ့တာ ဖြစ်ပါ တယ်။
Zhang ဟာ အငြိမ်းစား ယူတော့မယ့် ဆရာဝန်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အခုလို ဖြစ်ရပ်ပေါ်ပေါက် ခဲ့တာမို့ သူ တာ ၀န် ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဆေးရုံအ ချို့မှာ လူကုန်ကူးမှုတွေ ပေါ်ပေါက် ခဲ့သလား ဆိုတာ စုံစမ်း မှုတွေ ပြုလုပ်သွား မှာဖြစ်ပါ တယ်။ Zhang ဟာ ကလေး မိဘတွေကို မွေး ဖွားလာ တဲ့ကလေးက နာမကျန်း ဖြစ်နေ လို့ စွန့်လွှတ် ရန် (သို့မဟုတ်) ပေးပစ်ရန် စည်းရုံး ခဲ့သေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နိုဝင် ဘာလ ကနေ ၂၀၁၃ ခု နှစ်၊ ဇူ လိုင်လအထိ ကလေးငယ်တွေကို လူကုန်ကူးမှု(၇)မှုကို ဖော် ထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီး ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ ကယ် တင်ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာမှာပဲ သေဆုံး သွားခဲ့ပါတယ်။ Zhang ဟာ ကလေးငယ်ကို ပြီးခဲ့တဲ့ ဇူလိုင် လမှာ ခိုးယူခဲ့ တာဖြစ်ပြီး အိမ်နီး နားချင်းတစ်ဦးထံ ဒေါ်လာ ၃၆၀၀ နဲ့ ရောင်းချ ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနောက် အဲဒီလူက အခြား သူတစ် ဦးထံ ဒေါ်လာ ၉၉၀၀ နဲ့ ပြန်လည်ရောင်းချခဲ့ ပါတယ်။ ဒီအမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရုတ်ပြည်သူ တွေ က ဆရာဝန် တွေ အပေါ် မကျေမနပ်ဖြစ် နေတာမို့ မျှတတဲ့ တရားစီရင်မှု ပြုလုပ်သွားဖို့ ဘေဂျင်းတိုင်းမ် သတင်း စာက တိုက် တွန်း ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
9/02/2013 10:08:00 AM health-news knowledge
8/21/2013 10:21:00 AM health-news
ချစ်သူ နှစ်ဦးပေါင်းဖက်လို. အိမ်ထောင်တစ် ခုထူထောင်ကြ ရာမှာ ကလေးယူမယ်. အချိန်ဟာ နှစ်ယောက် လုံး သဘောတူ ထားတဲ.အချိန်ဖြစ်သင့် သလိုကြို တင်ပြင်ဆင်ပြီး မှရတဲ.ကိုယ်ဝန်ဖြစ်ဖို.လဲ လိုပါတယ်။သမီးရည်းစားဘ၀မှာ ဘယ်လိုပဲ တစ်ယောက် အကြောင်း တစ်ယောက် သိစေကာမူ အတူနေ
လင်မ ယား ဘ၀လောက် ထဲထဲ ၀င်ဝင် သိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် လက်ထပ် ပြီး ကလေး မယူ တာဟာ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက်လေ့လာဖို့ တစ်ယောက်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုတစ်ယောက်က အလိုက် သိဖြည်.ဆည်းပေး နိုင်ဖို့၊ တစ်ယောက်ရဲ့ အားသာချက်ကို တစ်ယောက်က ဖော်ထုတ်ချီးကျူးပေး
နိုင်ဖို့ အချိန် ကာလ တစ်ခုကို ရစေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကိုယ်ဝန် တားနည်းတွေထဲ ကတစ်ခုခု သုံးဖို့ လိုအပ် လာပါပြီ။ လက်မောင်းထဲ ကိုယ်ဝန်တားတဲ့ ပစ္စည်း(အပ်)ထည့် တာဟာ အခုနောက်ပိုင် ခောတ်စား လာသလိုမြန်မာပြည်မှာ တောင်လုပ်လို.ရနေပါပြီ။အရင်ကနည်းတွေထက်စာရင်သူ.မှာအားသာချက်တွေရှိပါတယ်။ဥပမာ-ထိုးဆေးလို(၃)လတစ်ခါ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြီး ထိုးစရာ မလိုပါဘူး။ သားအိမ် ထဲပစ္စည်းထည်.သလို(IUCD, Intrauterine Contraceptive Device) မိန်းမကိုယ်ကိုအပေါက်ချဲ.ပြီးမှထည်.စရာမလိုပါဘူး။သားအိမ်ထဲ ပစ္စည်းထည့် တာမျိုး ကို ကလေးတစ်ယောက်မှမမွေးဘူးတဲ့ အိမ်ထောင် ကျခါ စအမျိုး သမီးတွေ မလုပ်ချင်ကြ ပါဘူး
ပရိုဂျက်စတင်(progestin) ဆိုတဲ့ အမျိုး သမီးဟော်မုန်း ပါတဲ့ မီးချစ်ဆံ အရွယ် လောက်ရှိတဲ့ အချောင်း လး (Implanon) ကိုလက်မောင်းအရေပြားအောက်
ဒီနည်းကထိရောက်မှုအလွန်ရှိပါတယ်။ထည်.ပြီးကိုယ်ဝန်ရှိသူ ၀.၀၅% ပဲရှိ
မဖြစ်နိုင်ဘူးလို. သုတေသန တွေကဆိုပါတယ်။
တခြားပရိုဂျက်စတင် ပါတဲ.ကိုယ်ဝန်တားဆေးတွေလိုပဲ ဒီနည်းသုံးရင် မီးယပ်
ရှိပြီး ၃လ အကြာမှာတော. ၁၀% လောက် ပဲဖြစ်ပါတော.တယ်။)
ပေါ်ပိုင်းအပြင်ဖက် ၊ရင်သားအပါအ၀င် ရင်သားအပေါ်ပိုင်းတို.ရဲ.အရေပြား
ချော်မှုနှုန်းက ၀.၃% ပဲရှိပါတယ်။ကိုယ်အလေးချိန် ၁၉၈ ပေါင်အထက်ရှိသူ
နိသင်က ကိုးရက်လောက်အထိခံလို. မေ.ပြီးအသစ်မလဲမိလဲနှစ်ရက်လောက်
လောက်ပဲကပ်ပေးဖို.လိုတဲ.အတွက် အချိန်မှန်သုံးပေးဖို. မခဲယဉ်းပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်တားဆေးလိုပဲ သွေးခဲစေမှုဖြစ်နိုင်ခြေကိုအနည်းငယ် မြှင်.တတ်စေ
-ပလာစတာကို သန်.ရှင်းပြီးခြောက်သွေ.တဲ. ဗိုက်၊တင်ပါး၊လက်မောင်းအပေါ်
အောင် ခေါက်ပြီးမှအမှိုက်ပုန်းထဲထည်.ရပါမယ်။မြေကြီးထဲနဲ. ရေမြောင်းရေ
တွင်းတွေဆီ ဟော်မုန်းပျံနှံ.မသွားအောင် အိမ်သာထဲကို မစွန်.ပစ်သင်.ပါဘူး။
-ရာသီသွေးစလာတဲ.ပထမဆုံးရက်မှာ ပလာစတာစကပ်ရင် ကွန်ဒုံးပါတွဲသုံး
-ပလာစတာကွာသွားရင်ချက်ချင်းကပ်ပေးဖို.လိုပါတယ်။ ၂၄ နာရီကျော်မှပြန်
8/08/2013 11:00:00 AM crime-news